China Fire blanket ụlọ ọrụ na-emepụta | Weicheng
Ngwaahịa a dị mfe iburu, nhazi dị mfe, enwere ike iji ya mee ngwa ngwa, ọ bụkwa nchekwa gburugburu ebe obibi na-acha akwụkwọ ndụ, bụ nhọrọ nke mgbochi ọkụ, ọgụ ọkụ na njikwa ihe mberede. "Ọ ka mma ka ị ghara iji ya karịa ịghara inwe ya nwa oge.".
(1) 1 m * 1 m (2) 1.2 m * 1.2 m (3) 1.5 m * 1.5 m (4) 1 m * 1.8 m (5) 2 m * 2 m. Nkọwa ụzọ abụọ ahụ dị mma iji kpochapụ obere ọkụ ọkụ, nkọwa nke ikpeazụ dịkwa mma iji kpochapụ isi iyi ọkụ ma kechie ndị mmadụ maka mgbapụ. A na-akwakọ ngwaahịa niile na igbe ọkụ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie ma ọ bụ akpa akwa uhie maka nnweta dị mfe.
Na ọkwa mbụ nke ọkụ ahụ, a na-ekpuchi blanket ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ, enwere ike wepụ ọkụ ọkụ na obere oge.
1. Ọ bụrụ na ọkụ, blanket mgbapụta ọkụ na-ekpuchi ahụ ma ọ bụ ahụ nke ihe a ga-anapụta, ka iji gbapụ ngwa ngwa ọkụ, nke na-enye ezigbo enyemaka maka enyemaka onwe onye ma ọ bụ ịkwapụ nke igwe mmadụ ahụ . Ọ bụrụ na enwere ezigbo ihe ọghọm ọkụ, ịnwere ike ị na-eyi akwa blanket, nke nwere ike belata oke ihe ọkụ ọkụ.
2. Ọ bụ ngwa ọrụ mbenyụ ọkụ mbụ nke mbụ maka ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụgbọ mmiri, ụgbọ ala na ụlọ obodo.
Fire blanket bụ a pụrụ iche ọgwụgwọ nke iko eriri twill akwa, na-eji ire ụtọ, adụ, kọmpat na ndị ọzọ e ji mara. Ọ nwere ike ịdị iche iche site na isi iyi ọkụ ma kechie ihe ndị na-adịghị agbanwe agbanwe. Enwere ike iji blanket ọkụ ahụ ọtụtụ oge na-enweghị mmebi.
Uru nke blanketị ọkụ bụ: 1. Ọ dịghị oge ọdịda; 2. Ọ dịghị mmetọ nke abụọ; 3. Mgbapu ọkụ na nguzogide okpomọkụ dị elu; 4. Mfe ibu. Ebe ọ bụ na blanketị ọkụ ahụ bụ akụrụngwa na-agba ọkụ, ọ nwere ike ịkwụsị ọkụ na oxygen na ọsọ ọsọ ọsọ, na-achịkwa mgbasa nke ọdachi ahụ, enwere ike iji ya dị ka isiokwu nchekwa maka mgbapụ oge, yabụ blanketị ọkụ bụ ihe di nkpa maka ngwa oku.
Nke gara aga: Ihe mgbochi ọkụ
Osote: Anwụrụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ